Export of Services - Zimtrade The National Trade Development and Promotion Organisation of Zimbabwe
With one of the highest literacy rates in Africa, Zimbabwe has a pool of highly educated and trained professionals in various fields. Zimbabwe has excellent telecommunications infrastructure in terms of connectivity, bandwidth, reliability and cost competitiveness and is an ideal Sourcing Platform for value-added services for the English speaking world. Zimbabwe has competitive advantages in:
A wide range of IT and IT Enables services, including voice and non-voice based Business Processing Outsourcing (BPO) activities, namely;
Publishing, Communications and Advertising
Zimbabwean experts, with extensive experience in diverse fields (agriculture, environment, engineering design, process design, standards & norms, productivity & innovation, communications and advertising, and mining, among other areas) provide value-added services to the region and the world over.
Zimbabwe has an extensive network of Universities (public & private) Colleges, Schools, Technical, Vocational Education & Training (TVET) Centres that offer quality education at certificate, diploma, higher diploma, degree, post-graduation and research /doctoral levels. Zimbabwe, as a center of excellence in Training & Education fields, can be home to students from the region.